Ndụ na-amalite na ngwụsị nke mpaghara nkasi obi gị. - Neale Donald Walsch - Pedia kwuru
Ndụ na-amalite na ngwụsị nke mpaghara nkasi obi gị. - Neale Donald Walsch
Anyị niile nwee nrọ na ebumnuche gị na ndụ. Mana ọtụtụ mgbe, ọ bụ ihe anyị na-ahụ gburugburu anyị na ihe ndị ọzọ gbara anyị gburugburu na-eme. Mana anyị kwesịrị ịghọta na anyị ekwesịghị ịmachi onwe anyị n'ụzọ ọ bụla.
Kama anyị kwesịrị ịchọpụta ohere dị iche iche ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, jwaa ya. Yabụ na anyị ga-aghọta n'ezie nhọrọ dị iche iche dị. Anyị nwere ike ime atụmatụ anyị otu a.
Mara na ndụ ga-atọ gị ụtọ naanị mgbe ị push tufuru ya. Withinnọ n'etiti mpaghara nkasi obi akọwapụtara dị mfe. Ọ chọghị ka anyị tinye onwe anyị ka anyị mee ihe anyị na-adịbeghị njikere ichebe ime. Ọ naghị eme ka anyị nyochaa onwe anyị ma zụọ ikike anyị.
Mgbe i siri na mpaghara nkasi obi gị puta ma nwaa ihe ị na-akọwaghị, ị nwere ike ịchọpụta ihe ọhụrụ gbasara onwe gị. Ihe ndị a na-eme ka ndụ tọkwuo ụtọ ma nye gị ohere ịmara na ya.
Ọ bụ na njedebe nke nkasi obi mpaghara gị akọwapụtara na ndụ gị ga-amalite. Mepee onwe gị ihe ndị ị na-amaghị banyere ha na-agbanwe ndụ gị dị iche na nrọ gị gbanwekwara. Ga-achota ndi ohuru ndi nwere akuko ohuru na mmetuta di iche n’aru gi.
Then ga - enweta mkpali dị iche iche nke ga - eduga n'ọchịchọ dị iche iche. I nwere ike ịhụ onwe gị ka ị na-achọ ụzọ ndụ dị iche na nke ị na-agaghị echetụ n'echiche ma ọ bụrụ na ị hapụghị mpaghara nkasi obi gị. Dịrị njikere maka mgbanwe ndị a ma bie ndụ na-atọ ụtọ ma na-enye afọ ojuju.
Akụkụ nkasi obi mpaghara
Isi okwu banyere ndu